Amantombazana amaninzi afana nombala omnyama. Uhlala ekhangeleka kakuhle kwaye akaze aphume kwimoya. Nangona kunjalo, ipeyinti emnyama ayiyona ingozi kunokuba ibonakale. Inempembelelo enobungozi kwizinwele.
Iyintoni imfihlelo yeenwele ezimnyama?
Okokuqala, lo ngumfanekiso wesibhukela esibulalayo, obonakala esithembele kuye. Izinwele ezimnyama, izicathulo eziphezulu, i-lipstick ebomvu, ukubukeka ngokuzithemba-akuyi kuphuma ngefashoni. Okwesibini, amantombazana amaninzi afuna ukuphuma kwisihlwele, ungakhangeli njengabantu bonke. Ngoko ke, baqhuba iimvavanyo kunye noshintsho lomfanekiso. Konke kuqala ngento yokuba iinwele zifakwe kumnyama. Kwaye ngoku ngexesha, kukho iintlungu. Kubonakala ukuba ukulahla ukupenda okumnyama akulula. Ukongezelela, kufuneka uhlale uvala iziphelo, ngaphandle koko iingcambu eziqhakazile ziya kubonakala njengeempawu zokubala. Ewe, ukuba umonde ukwanele ukuba udwebe izinwele zanele. Kwaye ukuba akunjalo? Emva koko uya kufuneka uhlale uhlambalaza, nokuba awufuni.
Iyiphi indlela engcono kakhulu yokugaya iinwele zakho ezimnyama?
Ngaphambi kokuthatha isigqibo ngenguqu enkulu ngaphandle, cingisisa, kodwa ngaba ufuna umbala omnyama? Emva kokuba umbala wesikhumba obalahleko awusoloko ulungele, kodwa ukugcina rhoqo i-tan ayilula. Ukongezelela, umbala omnyama unikeza isikhumba esiluhlaza. Ngenxa yoko, umntu angakwazi ukufumana uhlaza olungapheliyo, kuya kubonakala ngezikhathi ezithile: izibhunqa, imibimbi, ubomvu.
Ukuba ungeyiyo loo miphumo, kuyafaneleka ukuba ucinge malunga nepayipi engcono ukhetha. Ukuba ukhetha ubume bendalo, mhlawumbi ufanele ukhethe okukhethiweyo kwi-basma. Basma ibhetele kangcono kunemibala yobugcisa. Kodwa isetyenziselwa ukudibanisa nekhofi okanye i-henna, ekubeni inganika umthunzi ohlaza okwesibhakabhaka ngokucacileyo. I-basma iqulethe izinto ezingakhange zibalale kakuhle iinwele, kodwa zivuselela ukukhula kwazo, zinike i-glitter kwaye zikhusele ukulwa. Ipeyinti iveliswa nge powder.
Ungayifaka njani inwele kunye neebhasi?
Thatha i-50-100 amagremu we powder (kuxhomekeke kwiinwele ezinde) kwaye udibanise ne-henna, kwisilinganiselo se-2: 1. Ukuba ufuna ukuthola umbala ongeyomnyama, kodwa umbala omnyama we-chestnut, wongeza i-henna ngaphezulu. Emva koko, uthele umxube ngamathumba uze udibanise de ifike i-gruel. IKomkov ayifanele ibe. Emva koko, gubungela upende nge-lid for half half and wait until it is in. Emva koko unokuqhubeka udaye iinwele zakho.
Okokuqala sebenzisa upende kwiingcambu, kwaye emva kwecandelo le-occipital yentloko. Emva koko usasaze yonke ubude beenwele. Ukuba iinwele zinde kwaye zide, kungcono ukucela umntu ukuba akuncede ngomzobo, ukuze ungaphuthelwa nantoni na. Ngomthunzi ocebileyo, shiya umxube ngeyure, uze uhlanza ngamanzi afudumele.
Impendulo yodwa ye-basma ibala kukuba ayikho ixesha elide kwaye uza kufuneka unakekele ngokunyamekela iinwele zakho. Zama ukusebenzisa ama-shampoos aqukethe izithako ezinobumnene nezendalo. Oku kusebenza kwiimaski kunye neelms. Ukugcina umbala, sebenzisa ukumnika kwe-wax kunye ne-basma. Ukwenza oku, uthele i-powder ngamanani alinganayo (25 amagremu) weelitha zamanzi, uze ulandele i-gauze. Gcoba nge-infusion yeenwele.
Olunye uhlobo: emva kokupenda kunye ne-basma, awukwazi ukusebenzisa imibala yeenwele equkethe iikhemikhali. Oku kunokukhokelela kwimiphumo engalindelekanga.
Ipeyinti emnyama yabakhiqizi abaziwayo
Ukuba awufuni ukupenda iinwele kunye ne-basma, kuyafuneka ukuba ukhethe upende oluhle. Iinkampani ezininzi zehlabathi ze-cosmetology zinikeza iintlobo ezahlukeneyo zobuncwane: eziqhubekayo, i-ottenochnoe, i-bezammiachnoe.Otlichayut zixesha lokucoca, ukusebenzisa kunye nomxholo.
I-mousses echatyiweyo isetyenziswe ngendlela ye-shampoo kwaye ihlala malunga neveki. Kwiintlobo ze-bezammiachnyh aziqukethe izinto zeekhemikhali, ngenxa yokuba iinwele ziphosa ngokukhuselekileyo, kodwa kungekhona ixesha elide. Iipende eziqhubekayo zihlala kwizinwele ezifikelela kwiinyanga ezimbini, kodwa zilimaza impilo yazo.
Abakhiqizi abaninzi banzela iivithamini kunye neendidi ezahlukahlukeneyo kwiipende zabo, ezikhusela iinwele ukuba zome, ukulahleka kweentlupheko. Ngoko uthenge kuphela idayi yomgangatho, ukuba ufuna ukuba izinwele zakho zibukeke ziphilile. Akufanele ulondoloze kwinqwelo yakho. Iimpawu ezidumileyo namhlanje: I-Loreal, Garnier, Umbala, iMatrix, uLonda, uSess, Schwarzkopf. Okukhethwa nguwe!
Iingcebiso ezimbalwa zokucoca
Ungazami ukulondoloza kwidayi yeenwele, kwaye nokuba kunjalo unobunzima ngopende olumnyama. Khumbula umzekeliso: "Ulahlekelwa kabili"? Kule meko, iya kuba yinto efanayo. Emva kwakho konke, kuqala uhlawula ubuhle, kwaye emva koko unyango lwezinwele.
Ukuba uthanda ukuzama rhoqo ngokutshintsha umbala weenwele, ke kungcono ukusebenzisa i-mousses okanye ukupenda imibala.
Njalo ulandele imiyalelo yokupenda. Ukuba unganakulungele ukutshabalalisa ipeyin okanye uyifake phezu kweenwele zakho, uze ukonakalise isakhiwo seenwele. Kungenxa yoko, iingxaki ezahlukeneyo zivela: i-dandruff, brittle and hair loss.
Ukuba uthanda ukusebenzisa iipenisi eziqhubekayo kuphela, uphume ngaphandle kwemveliso equle ubuncinci be-ammonia. Ukongezelela, ezininzi iinkampani zinikeza isalathisi sokukhawuleza.
Ukuba usebenzisa ipeyinti eqhubekayo, musa ukubopha intloko ngehawula okanye ipakethi. Impembelelo yokutsalwa kwe-greenhouse iyimfuneko kuphela kwidayi eyenziwa ngokwemvelo.
Ukutyhila iingcambu akudingeki ukupenda zonke iinwele. Ngoko uyababandezela. Ukuba itytile iyadingeka, yenza oku ekupheleni kwenkqubo, imizuzu embalwa ngaphambi kokuhlambulula.
Qinisekisa ukusebenzisa ii-masks kunye ne-ballar afterburning. Baya kunceda iinwele ukuba zibuyele.
Indlela yokuhlamba ipeyinti emnyama?
Ngokukhawuleza okanye kamva uya kufuna ukuzama umbala obala obala. Kodwa ukukrazula ipeyinti emnyama akulula. Ngoko ke, kufuneka wenze oku ngokucophelela nangokuchanekileyo, ngaphandle koko ungonakalisa iinwele zakho. Kungcono ukuzama ukukrazula imiphunga yabantu abamnyama bebala.
Kefir iyona nto ibhetele. Kuyo kufuneka udibanise ijusi encinane, uze uhlanjululwe nje iinwele zakho. Kukho ezinye iipokethi kunye ne yogurt:
Thatha i-milliliters ezili-100 ze-kefir, i-juice ye-lemon enye, iipunipoyi ze-4 ze-vodka okanye utywala otyilisiweyo, amaqanda a-2 kunye ne-teaspoonful ye shampoo, enomxholo ophezulu we-PH. Hlanganisa konke ude ufumane ubunzima obufanayo kwaye usebenzise kwizinwele. Faka isicelo kwisistim, uhambe ngokukhawuleza ubude obude. Emva koko, faka isitya sokuhlamba ekhanda lakho, wimboze ithawula uze ugcine umxube kwizinwele zakho ngeeyure ezingama-7-8. Ekugqibeleni, hlambulula kakuhle ngamanzi afudumele kwaye usebenzise i-balm ekhethekileyo.
Isibini ithetha - okhethekileyo ukuhlamba upende. Ungayithenga kwivenkile. Ngokuqhelekileyo, emva kwezihlandlo ezi-7-8 zokusetyenziswa kwayo, iinwele zibuyela umbala wendalo. Kodwa ngamanye amaxesha kunokuba kuyimfuneko kunye nangaphezulu. Yonke into incike ekutheni umbala kunye nokuqina kwepeyinti.
Ezi zixhobo zibini ziyakunceda ukuba ujamelane nopopu omnyama. Ukuba wena ngokwakho awukwazanga ukuyichitha, qhagamshelana nomgcini wezinwele.
Njengoko ubona, umbala omnyama onobubele uhlala uphahla. Kodwa ngaphambi kokuba wenze isigqibo malunga nombala onjalo, cinga ngokucophelela, kodwa akuyi kubuhlungu na inwele kwaye uya kuba nomonde okwaneleyo ukuvelisa lo mmbala? Ukuba uthatha isigqibo sokungcolisa okokuqala, kukulungele ukuya kwi-hairdresser, apho iingcali ziza kwenza oku, zingenakonakalisa inwele zakho. Musa ukulibala malunga nokuzilungisa okhethekileyo emva kokuhlamba. Sebenzisa iimaski ezikhethekileyo kunye neenwele zeebhokhwe.
Iinkqubo ze Salon zokunyusa ubuninzi beenwele
Iimaski zokunyusa iinwele ekhaya
Iimaski zokunyuka kweenwele ekhaya
Ukuqhawula ekhaya: iresiphi elula kunye ne-gelatin kunye nomyalelo wesinyathelo-nge-nyathelo
Iimaski zohlobo lweenwele ezidibeneyo
I-Mysticism ngokudibanisa itayiti
Iindlela zokupheka ezifanelekileyo zonwele zeenwele zobisi
Iintsuku ezibalulekileyo ebomini babazali: ukunyaniseka
Uyazi njani ukuba umntu ongeyena intombi ixesha elide?
Ukubukeka kwe-Retinoic: intsingiselo yenkqubo, izibonakaliso, ukuchasene
U-Natalia Ionova wandisa i-esile yakhe ngefotohop, isithombe
Recme Brulee Recipe
Indlela yokuchonga imimandla kwindlu yokuhlala yiFeng Shui
Iingxaki ezinkulu kunye ezincinci zesini
Iigodlo zeengulube, zityinjwe ngamapheya
I-Curd ne-apple casserole